FAQ - Sand futha, Sump Pump, Gravel Pump Umkhiqizi
imodeli ezahlukene has ezahlukene intengo .Ngeke ukhethe model njengoba ngamunye nemingcele oyinikezayo. bese sicaphuna futhi wenze pls inkontileka .ngakho lokuqala ukulungiselela nemingcele.
Cha, asinawo ubuncane oda ubuningi. ngezinye izikhathi kuphela udinga athwale yizimpahla ukuze port yakho, ngakho pls kuqala hlola icala yizimpahla nge forwarder yakho.
Yebo, sinobufakazi ithimba eliqinile othuthukayo. Imikhiqizo zingenziwa ngokuvumelana request.you yakho ingangithumelela umdwebo futhi asikwazi ukukwenza njengoba ngamunye.
Yebo, singakwazi ukunikela ngemibhalo kakhulu kuhlanganise Izitifiketi Analysis / Conformance; Umshwalense; Umsuka, namanye amadokhumenti ukuthekelisa lapho liyadingeka.Futhi umdwebo uhlaka niwele umdwebo kwesigamu.
Maqondana nezibonelo, phambili isikhathi imayelana ezingu-7. Ukuze nokukhiqizwa kwezinto ngobuningi, phambili isikhathi izinsuku ezingu 20-30 ngemva kokwamukela inkokhelo idiphozi. Izikhathi phambili lizoba ngempumelelo uma (1) sesamukele imali yakho, futhi (2) siyamukeleka sakho sokugcina imikhiqizo yakho. Uma zethu izikhathi lead azisebenzi umnqamulajuqu akho, sicela uye phezu nezidingo zakho nge ukudayiswa yakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukuze ifanelane nezidingo zakho. Ezimweni eziningi esikwazi ukukwenza so.we Ziningi izingxenye ezisele ku isitokwe, ngakho kwesinye isikhathi kungasebenza ukulethwa isikhathi akunzima.
I-Kwezinye izingxenye, sikunikeza zewaranti unyaka owodwa, kodwa izingxenye wetted, ngokuvamile kuyoba .Le 3-6months kuncike isimo sabasebenzi ezahlukene
Yebo, ngaso sonke isikhathi ukusebenzisa izinga okusezingeni ukuthekelisa packaging.we ziye timbiwa lokhu cishe 16 iminyaka, ngakho, ungakhathazeki mayelana iphakheji.